Impelasonto yothando ... Ukusebenzisana Romance | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Amaviki e-Romantic ezindaweni ezikhethekile
Amaviki angamaRoma emvelo
Impelasonto yokuthandaza yedwa kufanele isivele ngempelasonto. Ukuqala ngoMgqibelo kusihlwa futhi ukuxakeka ngezindaba zomsombuluko ozayo ngeSonto ntambama kuletha ukucindezeleka okukhulu kunokuphumula.
Imibono yokuphela kwezimpelasonto zothando
Kuyinto emangalisayo uma ungaqala ngempelasonto yothando ngoLwesihlanu kusihlwa. Khona-ke, okokuqala, kukhona ubusuku bokulala, uma nje ufuna, ohlelweni. Ukudla kwasekuseni embhedeni, mhlawumbe nge-champagne noma champagne, kufakiwe. Ngakho ukuqiniswa ungakwazi ukujabulela ngokugcwele uMgqibelo ozayo futhi ujabulele.
Umbhangqwana ngobusuku obuseduze
Iveke yama-romantic ne-wellness
Ngakho-ke akukho lutho oluphazamisa lo mdlalo, kuhle ukuba ungachithi ngempelasonto ezindongeni ezine ezifuywayo. Okunye okuqaphele njalo ukuthi ungakwenza "nje". Ungathola kanjani kusuka ezindongeni kuya ezindongeni futhi ungatholi ukuthula kwangempela.
Uhambo oluya empelasonto yothando akudingeki kube kude. Emadolobheni akho amakhulu noma alandelayo ngokuqinisekile ihhotela elihle. Kwabahlali bomuzi, amahhotela angaphandle asezindaweni zasemaphandleni noma izindlu ezihambelanayo izivakashi olwandle kukhona ushintsho olukhulu oluvela edolobheni elihle kakhulu.
Ngisho nehhotela lokunethezeka lingase libe yinye kanye. Eziningi zalezi zindlu kukhona amalungiselelo akhethekile emibhangqwana. Ungakhetha kusuka ezihlukahlukene zamaphakheji enhle okuhlanganisa okugeza, ukubhucwa kanye nezinye izindlela zokwelapha yena naye. Lezi zicelo zingakujabulela ndawonye, ​​noma ekamelweni lakho noma kuma-spas wangasese wamahhotela.
Esikhathini spa akukho kuphela flavour abushelelezi izimbali noma izithelo ukuthi eningase nikhethe ladies, kodwa futhi eqotho kunjengokubhukuda ku Scrubs ubhiya wesikhamo ngoshoki noma ingxube usawoti-uju amadoda ngathanda ngempela.
Uma unomsebenzi omningi ongakwenza emahoreni, ungase ungafuni ukuhlala ehhotela elijwayelekile ngesikhathi sakho samahhala esiyimfihlo. Kuthiwani ngezimpelasonto zothando phakathi kwe-igloo? Njengoba ziboshwe emafesheni afudumele afudumele, kukhululekile kakhulu lapho. Ama-gloos ahlotshiswe ngokucacile futhi akhanyiswa ngokungaqondile.
Omunye umqondo ngempelasonto ehlathini. Ihhotela laseHay seliyatholakala ezindaweni eziningi. Lezo zinhlelo ngokuvamile zihlanganisa iziphuzo wamukelekile, Hofrundgänge, multi-Yebo amakhandlela kwakusihlwa bese nobusuku embhedeni enkulu olunephunga elimnandi amakhambi hay. Ukudla kwasekuseni kulungiswe kabusha kusuka izithako zendawo futhi kusetshenziswe ngesikhathi esifisa.
Iveki ephuthumayo ihlangene ne-Baumhaushotel. Ezindaweni eziphakeme, izindlu zamasimu ziqinile futhi zivikelekile futhi azidingeki zithuthuke.
Umkhuba omusha wezimpelasonto zothando uthatha eU.SA. Kube khona amahhotela akhethekile isikhathi esithile nemishini ekhethekile kakhulu. Amakamelo ahlotshiswe ngokwezingqikithi zokuziphendulela. Jacuzzis emakamelweni, ezinkulu ukudlala amasimu eziningana amathoyizi ongakhetha kuzo, lapho manje kunabamemezeli abangaba ngu nazo eJalimane kulezi amahhotela.
Ukuqonda kuyindaba, futhi inhlalakahle yempilo inakekelwa ekamelweni. Izindlu ezinezimo ezivuthayo azivumeli izingane zibe izivakashi, ngakho-ke ungakwazi ukuphelelwa yisikhathi.
Ukuzwa njengenkosi noma indlovukazi: yilokho okushiwo amahhotela amaningi esigodlo. Emakamelweni angaphakathi amakhosi abo ichithwa izinsuku fabulous kanye nobusuku futhi Culinary isinkwa sayo yonke iqhinga encwadini.
Impelasonto yothando iyakufanelekela ukuhoxisa kuyo yonke imiphakathi. Ifulethi noma ifulethi, i-log cabin elihle elwandle, olwandle noma ezintabeni likumema ukuba.
Ukudla okwanele kanye nemishini ephelele ngebhethini yembhedeni nazo zonke izinto ezengeziwe ezinikezwa ngabakwa-Host. Ngalokhu uvele uthathe ukhiye ku-domicile futhi ube khona kuze kube sekuphumeni kokuthula okumangalisayo. Ungasebenzisa lezi zinsuku endlini noma embhedeni noma uphume emvelweni. Ayikho ifoni, akukho khompiyutha noma i-laptop, akukho i-TV nomsakazo futhi akukho foni ephathekayo okufanele iphazamise ukubumbana.
Ukuhlanganyela kuhlala emvelweni
Ekugcineni yisikhathi sokujabulisa, ukupheka nokujabulela ndawonye. Ukuhamba kwemvelo kukhanda ikhanda lakho mahhala bese wenza indawo yokucabanga nemibono emisha. Ulalela imisindo yemvelo futhi uzizwa uphila futhi uphila kahle.
Umculo ngokuqinisekile kuyisici esibangela ukuthandana. Ngempelasonto yothando yomculo, ungahlanganisa ukuhambela kakhonsathi ngesidlo esimnandi nokuhlala ngobusuku ehhotela elihle.
Umcimbi ubheka umculo ozobambisana nabo bobabili, noma into entsha ngokuphelele ukuthi bobabili abazi okwamanje. Kungaba i-classic noma i-hit, i-pop nedwala, lapho uhlala khona. Ngisho nezingoma zomculo kanye nokuthanda izindaba esiteji sezemidlalo zifaneleke kakhulu ukuguqula isimo sengqondo sokuthandana.
Uma kwenzeka kwenzeka ngoLwesihlanu, ungasebenzisa uMgqibelo olandelayo ngeminye imisebenzi eminye. Ukuhamba ngezindiza ezindizeni noma enqoleni ephethe lesi sifundazwe nakho okungazilibaleki ndawonye.
Ukuvakasha okwedlulele kokugeza okushisayo nezwe le-sauna kanye nensizakalo yezempilo kuyinikeza isimo sezulu esincane. Futhi uhambo yezitolo kungaba ngempela romantic, uma umuntu empeleni ngifuna enhle Lingerie esikisela ucansi ozame kusihlwa ehhotela.
Okunamathiselwe okukhathazayo | ubambiswano
Ubuhlobo bobulili obufanayo ... Ukuphuma ngokubambisana
Ukufudumala kanye nomlingani wakho Ukubambisana okuthandekayo